I-Technicolor PostWorks 'uBen Murray ukuhola iPhaneli ekusakazweni ku-DOC NYC - NAB Bonisa Izindaba nge-Broadcast Beat. Umsakazo Osemthethweni we-NAB Show, Umkhiqizi we-NAB Bonisa LIVE
Ikhaya » Izindaba » I-Technicolor PostWorks 'uBen Murray ukuhola iPhaneli ekusakazweni ku-DOC NYC
I-Technicolor PostWorks 'uBen Murray ukuhola iPhaneli ekusakazweni ku-DOC NYC
I-NEW YORK- Technicolor PostWorks Iphini likaMengameli wezinkonzo zobunjiniyela uBen Murray uzolinganisa ingxoxo yephaneli ekulungiseleleni amafilimu okusakazwa kwiNgqungquthela ye-DOC NYC PRO yesonto elizayo, ehlangene nomkhosi wefilimu we-DOC NYC. U-Murray uzojoyina uJohn Campbell, umlingani kanye nomphathi wabaphathi eBuffalo 8; umkhiqizi / umqondisi uBlair Foster we-Jigsaw Productions, futhi Umenzi wefilimu U-Alysa Nahmias, umsunguli we-Ajna Films. I-Titled Isifundo se-Case: Lungisa Ifilimu Yakho Yokusabalalisa, iseshini ihlelwe ngoLwesibili, ngoNovemba 13 ku-3: 45 pm kusikhungo se-IFC.
Ngokusakazeka kwezinsizakalo zokusakaza kanye namapulatifomu asekelwe kuwebhu, abenzi befilimu banamathuba amaningi kunanini ngaphambili yokusabalalisa amafilimu abo, kodwa labo abangacabangi ngokucophelela bangenza amaphutha abizayo noma bangaphumeleli imiphumela emihle kakhulu. "Iphaneli ngeke inikeze iseluleko hhayi kuphela ekulungiseleleni ezobuchwepheshe, kodwa kuyo yonke imisebenzi eya ekuhanjisweni kwefilimu," kusho uMurray. "Lokhu kufaka phakathi ikharityhulam, izimpande zokhula ezikhankasayo kanye nokusebenza nabasakazayo ukuze zithole igama."
John Campbell ungumsunguli we-JCINTIME, LLC, inkampani yokuphatha nokukhiqiza, kanye nomlingani kanye nenhloko yabaphathi eBuffalo 8, i-BondIt Media Company kanye nenkampani yabezindaba egcwele ngokuthuthukiswa, ukukhiqizwa, ukuhlukaniswa kwemisebenzi nokuphathwa kwamasevisi wokuphatha amaklayenti. Ulawula ama-movie nabaqondisi bethelevishini, abalobi nabadlali. Izikweletu zakhe njengomkhiqizi zihlanganisa Umfana, Intombazane, Iphupho, Kuphelile kanye nedokhumenti ezayo Ikusasa Elimnandi. Wabuye wakhiqiza i-2018 March ku-Washington Film Festival.
UBlair Foster wathola ama-Emmy Awards amabili emsebenzini wakhe Academy Awardifilimu yokugubha I-Taxi eya endaweni emnyama kanye no-Emmy kaMartin Scorsese UGeorge Harrison: Ukuhlala ezweni lezinto ezibonakalayo. Ku-2017, waqondisa futhi wakhiqiza, kanye no-Alex Gibney, I-Rolling Stone: Izindaba ezivela e-Edge for HBO. Wabuye wakhiqiza idokhumenti ye-Netflix Thola Me Roger Stone okuyinto eyaqala ku-2017 Tribeca Film Festival. Ezinye izikweletu zifaka phakathi Sinatra: Konke noma Akukho lutho Konke, UMnu Dynamite: Ukuvuka kukaJames Brown, Umlando we-Eagles, Sitshela Izimfihlo: Indaba Ye-Wikileaks futhi Park Avenue: Imali, Amandla kanye ne-American Dream.
U-Alysa Nahmias umklomelo Umenzi wefilimu obanikazi bokuqala bokuqondisa, Izikhala ezingapheli (eqondiswa ngqo noBen Murray), wathola umklomelo we-2012 Independent Spirit, futhi eqoqweni elihlala njalo le-Museum of Modern Art, eNew York. Njengomkhiqizi wokudala, izikweletu zakhe zihlanganisa Ukungqubuzana, Akukho ukukhanya futhi akukho ndawo noma kuphi, ntambama ye Faun: Tanaquil Le Clerq futhi Isihlangu neSikhu. Umsebenzi wakhe uboniswe emikhosini nasemibonisweni emhlabeni wonke, kuhlanganise neSundance, Berlinale, i-SXSW, i-HotDocs, i-Sheffield Doc / Fest, i-CPH: i-DOX, ne-Film Society ye-Lincoln Center Sound + Vision, futhi ikhishwe ngokomthetho e-US nase-UK.
UBen Murray unguMongameli we-Creative Services ku-Technicolor PostWorks NY. Amakhasimende akhe avamile ahlanganisa uKen Burns, u-Alex Gibney, uMichael Moore noMartin Scorsese. Isici sakhe esiqondisa i-debut, Izikhala ezingapheli, wathola umklomelo we-2012 Independent Spirit futhi wahlolwa emikhosini nasemincintiswaneni emhlabeni wonke. Wasungula I-Room, inkampani yokukhiqiza yokuthutha i-boutique ehlangene ne-Deluxe ne-Technicolor ngaphambi kokuba itholakale yi-Technicolor PostWorks ku-2012. Uphethe i-BFA kuyi-Frimu neThelevishini Ukukhiqizwa kusuka eTisch School of the Arts eNew York University futhi okwamanje ungumfundi we-MBA eWharton School, University of Pennsylvania.
Umsekeli omude we-documentary nozimele, i-Technicolor PostWorks inikeze izinsizakalo zokukhiqiza ngemuva kokuhlolwa kwamafilimu amane kulo mkhosi wefilimu we-DOC NYC. Zihlanganisa:
Lokho Akushoyo: Ubuciko KaPauline Kael (ukuvumelanisa okuhleliwe, ukufaka umbala nokunikezwa).
IsiGwebo (ukuvumelanisa okuhleliwe, ukufaka umbala nokunikezwa).
Ubugebengu Ziyisijeziso (ukuvumelanisa okuhleliwe, ukufaka umbala nokunikezwa).
I-Breslin no-Hamill: Abaculi bokugcina (ukuvumelanisa okuhleliwe, ukufaka umbala nokunikezwa).
Mayelana ne-Technicolor PostWorks eNew York
I-Technicolor PostWorks eNew York iyisithombe esiphezulu kunazo zonke sokuhamba kwesithombe se-East Coast kanye nesiteshi sokuthunyelwa ngemuva, okusebenzisa iqembu elihlukile labaculi bokudala, onjiniyela kanye nabaphathi bephrojekthi ukukhonza amaklayenti ethu ngokusebenzisa inqubo yefilimu neyokuqeda i-TV.
I-Technicolor PostWorks eNew York inikeza umthombo owodwa ophelele kuyo yonke imfuneko yokuthunyelwe, kufaka phakathi amakhondomu edijithali enkambinkimbi, ukucabanga kwefilimu kanye nokubuyiselwa, ukuhlela okuhlanganyelwe okungafani nokuhlelwa HD/ UHD ukusakaza kokuqedela, i-4K i-digital cinema, ukusekelwa kokuqukethwe kokuqukethwe komhlaba jikelele, kanye nefilimu egcwele neyomculo we-TV ngezigaba eziyisishiyagalolunye zokuxuba.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, vakashela Www.technicolorpwny.com
Injini yokusakaza Ukusakaza Ubunjiniyela CES2017 ukusatshalaliswa doc nyc Amadokhumenti Ifilimu ezizimele Ukukhiqizwa kokuthunyelwe I-SoftAtHome, i-MStar, i-CES2017 Ama-spears nama-Arrows Ubuchwepheshe be-TV I-Ultra HD Forum Umlingisi wevidiyo	2018-11-08
Ngaphambilini: I-Media Links Ikhishwa Inguqulo Yelimi YaseJapane ye-ProMD Yokuthuthukiswa Kwesofthiwe Yokuphathwa
Olandelayo: Igumbi lokuLawula i-Calvary Chapel Moves Control, Ukuthuthukiswa kokusakaza i-Pix BPswitch Yokuhlanganiswa kokukhiqiza okuhlanganisiwe
Hey Buddy !, Ngithole lo lwazi kuwe: "I-Technicolor PostWorks 'uBen Murray ukuhola iPhaneli ekusakazweni ku-DOC NYC". Nasi isixhumanisi sewebhu: https://www.broadcastbeat.com/technicolor-postworks-ben-murray-to-lead-a-panel-on-distribution-at-doc-nyc/. Ngiyabonga.